युक्रेनमाथिको आक्रमण नरोकेको भन्दै अमेरिकाले रुसमाथि फेरी लगायो यस्तो प्रतिबन्ध ! अब के हुन्छ ? — Sanchar Kendra
युक्रेनमाथिको आक्रमण नरोकेको भन्दै अमेरिकाले रुसमाथि फेरी लगायो यस्तो प्रतिबन्ध ! अब के हुन्छ ?
एजेन्सी । रूस र यूक्रेनबीच विभिन्न विषयहरूमा भइरहेको वार्ता थप धेरै समय लम्बिन सक्ने युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीका एक सहयोगीले बताएका छन्।
युक्रेनी राष्ट्रपतिका सल्लाहकार मिखाइलो पोदोल्याकलाई उद्धृत गरी ‘द किभ इन्डिपेन्डेन्टले शनिबारको समाचारमा उल्लेख गरेको छ, ‘मस्कोको अडानहरू अझै पनि उस्तै रहेको देखिएको छ। सुरक्षा ग्यारेन्टी, रूसी सेनाको निकासी र युद्धविरामजस्ता विषयहरूमा वार्ताले ‘धेरै समय लिन सक्छ’।’
यसअघि शनिबार रुसी रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता इगोर कोनाशेन्कोभले रूसी हवाई सुरक्षा प्रणालीले शुक्रबार राति पनि ६९ युक्रेनी सैनिक केन्द्रहरूमा प्रहार गरेको बताएका थिए। उनका अनुसार त्यसमा चारवटा कमाण्ड पोस्ट र चार वटा एन्टी-एयरक्राफ्ट मिसाइल प्रणाली रहेका छन्।
यसैबीच, अमेरिकाले रूसले प्रयोग गर्ने १०० विमानको मर्मत सम्भारमा प्रतिबन्ध लगाउने बताएको छ। द किभ इन्डिपेन्डेन्टअनुसार यी मध्ये एउटा हवाइजहाज रूसी अर्बपति रोमन अब्रामोभिचको हो।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको पेन्टागन प्रमुख लोइड अस्टिनले युक्रेनमा आफूहरू न त युद्धमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने न युक्रेनी आकाशलाई रूसी उडान विरोधी क्षेत्र स्थापना गर्ने बताए।
युक्रेनका सशस्त्र फौजका जनरल स्टाफका अनुसार रूसले युक्रेनविरुद्धको आक्रमणको समर्थन गर्न आर्मेनियाको १०२ औं रूसी सैनिक बेसबाट आफ्नो फौज तैनात गर्ने योजना बनाएको थियो।
तर फेब्रुअरी २४ मा रूस निकट मानिने डोनेट्स्क र लुहान्स्कका नागरिकले सुरक्षाको लागि मदत मागेपछि रूसले युक्रेनमा विशेष सैन्य परिचालन सुरु गरेको रूसले दाबी गर्दै आएको छ।
रूसले यूक्रेनमा आफ्नो सैन्य परिचालन रोक्न अन्तरराष्ट्रिय समुदायबाट अत्यधिक दबाबको सामना गर्दै आएको छ। रूसको आक्रमणपछि युक्रेनबाट हजारौं शरणार्थीहरू छिमेकी देशहरूबाट पश्चिमी मुलुक प्रवेश गरेका छन्।
यस्तै बेलायतका विदेशमन्त्री लिज ट्रसले युक्रेनमा सैन्य कारबाहीलाई लिएर रुसी व्यापारीहरूमाथि लगाइएका प्रतिबन्धहरू फुकुवा नहुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
‘यो एकदमै गाह्रो छ। यी कुलीन वर्गहरूले भ्लादिमिर पुटिनलाई आफूले गरिरहेको काम गर्न सक्षम बनाएका छन्। उनको हातमा रगत छ,’ रुसी व्यापारी विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाउने हो कि भनेर सोध्दा ट्रसले टाइम्स अखबारलाई भने।
उनले थपिन् कि रूसी व्यापारी रोमन अब्रामोविच, जो एफसी चेल्सीको स्वामित्वमा छन्, युनाइटेड किंगडम फर्कने सम्भावना छैन। रुसले डोनेट्स्क र लुहान्स्कका जन गणतन्त्रहरूलाई समर्थन गर्दै फेब्रुअरी २४ मा युक्रेनमा आफ्नो सैन्य कारबाही शुरु गरेको थियो।
पश्चिमी देशहरूले युक्रेनमा रुसी सैन्य कारबाहीलाई आक्रमण र मस्कोमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै कडा निन्दा गरेका छन्।